warshad sameysa jillaab olol olol leh iyo dhejiye loop
jillaab iyo loop cajalad iska caabin ah: sida uu qabo FAR 25.853 (a)
jillaab iyo midab cajalad loop: raacida kaarka pantone ama la qaabeeyay
jillaab iyo wax loop: 100% nylon
jillaab iyo loop codsi: khuseeya alaabada duulista
1) Waxaan nahay soo saare xirfadle ah oo wax soo saarka webbing muddo 13 sano ah.
2) Waxaan ku soo bandhigi karnaa cabir iyo qaab kasta oo macaamiisha looga baahan yahay
3) Dhamaan badeecadeenu waxay la kulmi karaan Yurub iyo Eco-friendly Standard.
4) Waxaan ku faaneynaa tayada ugu horeysa ee leh adeeg aad ufiican iyo qiimo tartan ah
Hook retardant Hook and Loop, Hook retardant Hook and Loop waafaqsan heerka FAR 25.853 (a) iyo ISO 15025, ayaa lagu dabaqayaa alaabooyinka duulimaadyada, dacwadda dabka aan caddayn iwm.
Meelaha la heli karo (mm): 16, 20, 25, 30, 38, 50, 100 16, 20, 25, 30, 38, 50, 100,110，120，150，160
Tijaabadan tijaabada waxaa lagu hayaa meel toosan iyadoo lagu dhex haysto aalad ku jirta golaha wasiirada iyadoo Bunsen burner (31.80mm olol) hoostiisa la dhigayo wakhti go'an (hoos eeg). Intaas kadib, muunada waa la arkaa.
Waxaan ku tiirsan nahay fikirka istiraatiijiga ah, casriyeynta joogtada ah ee dhammaan qeybaha, horumarka tikniyoolajiyadda iyo dabcan shaqaalaheena sida tooska ah uga qeybqaata guusheena tayada ugu Fiican China Nylon Flame Hook iyo Cajaladda Loop, Waxaan isku dayeynay inaan helno iskaashi mug leh oo daacad ah macaamiisha, helitaanka sumcad cusub oo sharaf leh macaamiisha iyo la-hawlgalayaasha istiraatiijiga ah.
Tayada ugu fiican Hook iska caabin ah iyo Qiimaha Loop, Si loo buuxiyo shuruudaha macaamiisha gaarka ah ee adeeg kasta oo kaamil ah iyo badeecad tayo leh oo deggan. Waxaan si diiran u soo dhaweynaynaa macaamiisha adduunka oo dhan inay na soo booqdaan, iskaashigeenna dhinacyada badan leh, iyo si wadajir ah u horumarinno suuqyo cusub, aan u abuurno mustaqbal ifaya!
Hore: jillaab dab olol iyo xarig loop / jillaab antiflaming iyo loop cajalad
Xiga: 100% naylon cajalad dhejis ah oo aan xirnayn
jillaab retardant ololka iyo loop cajalad / antiflaming ...
Olol celiyaha / dab-demiska iyo kabadhka loop